आईओएस १ and र आईप्याडओएसको 13th औं बिटा विकासकर्ताहरूको लागि जारी गरिएको छ आईफोन समाचार
टोनी कोर्टेस | | iOS 13, धेरै
को आईओएस १ and र आईप्याडोसको सातौं बिटा विकासकर्ताहरूको लागि। जस्तो कि जहिले पनि आईओएसमा प्रमुख अपडेट हुन्छ, त्यस हप्ता आधिकारिक रिलीज हुने हप्ताहरू व्यस्त हुन्छन्, विकासकर्ताहरूको परीक्षणको लागि बीटा संस्करणहरू जारी गर्दछन्।
केही मिनेट अघि उनीहरूले भर्खरै iOS13 र iPadOS को सातौं संस्करण बिटामा रिलिज गरे।
लाग्छ कि यस नयाँ संस्करणमा कुनै सौंदर्य परिवर्तन छैन। सामान्यको रूपमा, छैटौं अपडेटमा फेला परेका साना बगहरू, विकासकर्ताहरू द्वारा रिपोर्ट गरिएको, परिष्कृत गरिएको छ। हामीसँग यसलाई डाउनलोड गर्न समय भएको छैन। हामी केवल यो मात्र देख्न सक्छौं कि यसको साइज ज्यादै ठूलो छैन। केवल MB। MB एमबी। यसले हामीलाई सूचित गर्दछ कि ग्राफिक रूपमा त्यहाँ कुनै सुधार गरिएको छैन।
यदि तपाईंसँग पहिले नै छैठौं बीटा वा आईप्याडओएस स्थापना भएको छ भने यो धेरै सरल छ। तपाईंले भर्खर नयाँ प्रणाली अद्यावधिक खोज्नको लागि आफ्नो उपकरणलाई जबरजस्ती गर्नुपर्नेछ, र फेरी फेला परे पछि अपडेट गर्नुहोस्।
जाऊ त्यहाँ सेटिंग्स.
प्रविष्ट गर्नुहोस् सामान्य> सफ्टवेयर अपडेट.
तपाईले नयाँ संस्करण फेला पार्नुहुनेछ। अद्यावधिक गर्नुहोस्।
सधैं जस्तो, यदि तपाईंले अब यो गर्नुभयो भने यो सामान्य भन्दा बढि लिन्छ। त्यहाँ धेरै विकासकर्ताहरू वर्तमानमा एप्पलको सर्भरहरूबाट डाउनलोड गर्दैछन्। यदि तपाइँ केहि बेर पर्खनुभयो भने, डाउनलोड समय धेरै कम हुनेछ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि यो बेटा केवल विकासकर्ताहरूको लागि मात्र उपलब्ध छ। तिनीहरू व्यापक परीक्षण गर्न र एप्पलमा पत्ता लगाइएका बगहरू रिपोर्ट गर्न उनीहरूको लागि सुरू गरिएको हो। यदि तपाईं बेटाहरू प्रयोग गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ भने, नयाँ संस्करण सुरूवात भएको केही दिन पछि, सार्वजनिक भनिन्छ बिटा सुरू हुन्छ, अब प्रयोगकर्ता प्रतिबन्ध बिना। तपाईं हाम्रो अनुसरण गरेर यसलाई स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ ट्युटोरियल। होईन, सातौं संस्करणका लागि तपाईले केहि दिन पर्खनु पर्छ। आईओएस १ iPad र आईप्याडोसको छैठौं संस्करण पछि धेरै दिनहरू बितिसकेको छ। यस्तो देखिन्छ कि कपर्टिनोका केटाहरूले कडा परिश्रम गरिरहेका छन्। यसले हामीलाई सोच्न लगाउँछ कि केहि हप्ताहरूमा हामीसँग लामो प्रतीक्षा गरिएको अपडेट हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS 13 » विकासकर्ताहरूको लागि आईओएस १ for र आईप्याडोसको सातौं बिटा भर्खरै जारी गरिएको छ
म अझै पनि पाउँदिन
उस्तै कुरा कसैलाई हुन्छ (म विकासकर्ताको रूपमा दर्ता छु)
सर्भर संतृप्त छन्। थोरै धैर्य गर्नुहोला, तपाईले यो कसरी देख्छौं देख्नुहुनेछ ... 🙂
हुवावेले फोल्डिंग म्याटे एक्स फेरि सुरूमा ढिलाइ गर्‍यो